Futureplaces: Mampiantrano ny laboratoaran’olompirenena misahana ny media i Porto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2015 13:43 GMT
Hivadika ho hetsika midoroboka sy mahavokatra maro dia maro ao amin'ny futureplaces (toeran'ny hoavy), hetsika manova ny tanànan'i Porto ho “laboratoaran'olom-pirenena amin'ny media” isaky ny fotoanan'ny mihintsan-dravina, ny fotoan-dehibe hananganana tetezana ifandraisan'ireo kolontsaina, fiarahamonina, teknolojia, ary ireo fikarohana siantifika ao Portiogaly.
Amin'izao andiany faha-8 izao, mijanona eo amin'ny “firesahana fahavitrihana eo amin'ny mediam-baovao sy ny rafitra sosialy sy kolontsaina” amin'ny alalan'ny “atrikasa, tetikasa, resadresaka, hetsika famoronana zava-baovao sy fakan-kevitra maro dia maro” ny fanamby, hoy ny futureplaces.org.
Ny fandaharam-potoana amin'ity taona ity izay nanomboka tamin'ny 20 ka hatramin'ny 24 Oktobra, dia ahitana fikaonan-dohan'ireo efa manana doktorà avy amin'ny anjerimanontolo amin'ny resaka media nomerika, sy ireo resaka ifanaovana amin'ny mpiara-manorina sady MIT Center for Future Civic Media, Chris Csikszentmihályi, sy Paul Stacey, avy amin'ny Creative Commons , izay hanakatona ny fotoana amin'ny alalan'ny lanonam-pamaranana mitondra ny lohateny hoe “Global Citizens in a Global Commons“.
Misy “atrikasan'olona siantifika” ataon'ilay mpikaroka sady mpitendry mozika/mpihira Anabela Duarte (Mler Ife Dada teo aloha), hataon'ny Vox Express izay isian'ny rindrankira izay vita amin'ny fanazavan'ny mpampianatra akademika sy amin'ny boky famaranana fanohanan-kevitra PhD ny tononkira mivoaka ao.
Hisongadina amin'ny lanonana ihany koa ny fametrahan'ilay artista portiogey malaza MAISMENOS ±TAKIO NY AMPITSO± Laboratoara “Hack a Farm” [mandahatra asa ao amin'ny toby fambolena sy fiompiana] ao anatina zaridainan-tsakafo, lalao video, ary ny fanokafana fampirantiana fiainam-poko an-tanandehibe sy arisivam-pandraisana anjara an-tserasera Porto Pelo Porto (Porto avy amin'i Porto), izay mandrakitra ireo fanehoana ara-tantara ny anaran'ny tanàna.
Ity andiany faha-8 ity ihany koa no hanamarihana ny fanokafana arisiva media maro rantsana izay nandraketana ireo hetsika natao nandritra ny valo taona, sy ny fanombohan'ny futureplaces audiolab [laboratoaram-pihainoana futureplaces] “fantsona notsongaina ho amin'ny lasa ankehitriny ary hoavin'ny futureplaces.”
Nanoratra tamin'ny boky andrana tamin'ny herintaona (“Dissolution as Reinvention”Famafàna ho amin'ny famoronana indray) ny mpifantina sady talen'ny Programa PhD eo amin'ny Haibika (Fanomezana Endrika na Design), Heitor Alvelos, izay manana fijery manandanja eo amin'ny media sy ny olompirenena fa “raha mila elanelanina ny fisiana rehetra, dia tsy misy fiainana mivaingana azo tanterahina.”
Iray amin'ny sompitra fivelarana aorian'ny vanim-potoana nomerika ny Futureplaces. Tao amin'ny antsafa manokana nifanaovany tamin'ny Global Voices tamin'ny 2013, ilay endrika fantatra amin'ity hetsika ity, Antifluffy, no nampitandrina fa “afa-mahatakatra zavatra betsaka kokoa noho izay atolotry ny fampitam-baovao azy ireo ny olona,” ary hatramin'ny nitsirian'ny hevitra, iray amin'ny tarigetran'ny futureplaces ny handraisan'ny olompirenena ho eo an-tanany ny media.
Horesahan'i Chris Csikszentmihályi, izay vao voatendry ho Filohan'ny Fikarohana faritra Eoropeana misahana ny Fifamaliana Asa eo amin'ny Olona sy ny Solosaina ary Mpanavao Fanomezana Endrika sy Haibika ao amin'ny Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI na Ivontoeran'ny Teknolojia Ifamaliana Asa ao Madeira), amin'ny fotoam-panokafana amin'ny fomba ofisialy ireo endrika farimbonasa vaovao hamitana ireo fitaovana ara-kolontsainay. Nanomboka tamin'ny tetikasa Rootio, sehatra sôsiôteknika iray mampiharoharo ny vondrom-piarahamonina, ny telefônia, ny fananganana tambajotra ary ny radiô hananganana endrika fampitam-baovaom-piarahamonina ity manampahaizana amin'ny teknolojia, mpandala ny maha olona, mpahay fandravahana ary artista ity.
Ao anatin'ny fanahy mampisy ny futureplaces ny fiarahana ao anatin'ny fanandramana ara-mozika, ny fampitam-baovao eny ifotony. Ho ao ny radiom-piarahamonina Manobras Futuras ary, hisy indray amin'ity taona ity, ireo andian'antsafa ifanaovana amin'ny mpikaroka ary ho entin'ny mpianatra manana PhD hanakaiky kokoa ny siansa ny olompirenena amin'ny alalan'ny Radio Science, programa hamadihan'ireo mpampianatra oniversite ho sahaza ny olompirenena ireo tetikasam-pikarohana isan-karazany.
Asaina ihany koa ny mpanatrika handray anjara amin'izay mety ho “tati-baovao” tsy mahazatra amin'izao vaninandro izao: manome fampahafantarana ny futureplaces tsy misy saripika, tsy misy lahatsary ary tsy misy rakipeo. Lasa iainana ao amin'ny endrika vaon'ny fampitam-baovao taloha ao amin'ny futureplaces ny Sketchbook diaries [boky diarin'ny sombin'hatsikana] ahitana fandravahana, sorisoritra an-tsary, peta-tsary ary teny voasoratra.
Vakivakin-dahatsary avy amin'ny laboratoaran'olompirenena momba ny fitantarana avy ao amin'ny foiben-tantaran'i Porto – “Mozean'ny Takalon'ny Haza” nanaovana antsafa ho amin'ny Rising Voices 2013.
Misy ihany koa ny tanjaky ny Laboratoaran'Olompirenena omen'ny artista sy ny mpanao fikarohana, izay ny anjara asany dia ny manome fikafika sasantsasany amin'ireo zavatra an'arivony mifandraika amin'ny fampitam-baovao mila resahina, toy ny Rakitenin'ny Ampitso, Amboaran-tSary, Fomba fanaon'ny tafiditra tambajotra na Fanavotana ny Lovantsofina, natokana hanaovana fanadihadiana fohy ny fanatontosana an-tsarimihetsika ny tantaran'ny manodidina an'i Porto.
Ny vokatra avy any amin'ny laboratoara rehetra dia hozaraina amin'ny andro farany amin'ny fetibe, ao amin'ny Ny Akademian'ny Olompirenena, folakandro iray fampianarana ny fananganana ara-tsosialy sy ara-kolontsaina velomin'ny futureplaces. Tsy zary fialamboly fotsiny, averimberin'ny futureplaces ny leson'ny endrika vaovaon'ny fiainana andavanandro, mikendry ny hanome ireo dingana voalohany hizorana mankany amin'ny lalana lavalava kokoa izay ny ampitso ihany no afaka mamoaka ny vokatra azo avy aminy.
Topimaso sasantsasany amin'ny hetsika ataony ihany ireo. Ny programa iray manontolo dia azo jerena ao amin'ny futureplaces.org. Maimaimpoana avokoa ny hetsika rehetra.